Ala ọma jijiji siri ike 6.1 wakporo mpaghara Tokyo, enweghị ịdọ aka ná ntị mbufịt
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Ala ọma jijiji siri ike 6.1 wakporo mpaghara Tokyo, enweghị ịdọ aka ná ntị mbufịt
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Enweghị nsogbu mbufịt na Japan mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, mana ndị na -ahụ maka mmiri na -ahụ maka mmiri na -adọ aka na ntị maka ohere nke ala ọma jijiji ọhụrụ.
Usoro ịdọ aka na ntị mberede bidoro n'okporo ụzọ isi obodo Japan ka ala ọma jijiji siri ike mere na Tokyo.
Ebe izizi nke jolts dị n'okpuru ala bụ na ókèala mpaghara Tokyo na Chiba.
Enweghi ihe ojoo sitere na Tokai No.2 ike nuklia na Ibaraki Prefecture nke di nso Tokyo.
The Mlọ Ọrụ Japan Meteorological Agency kọrọ na nnukwu ala ọma jijiji 6.1 riri ebe mepere emepe na Tokyo taa.
Ebe etiti ala ọma jijiji dị n'okpuru bụ na oke ala Tokyo na mpaghara Chiba, na omimi nke kilomita 80.
Ụlọ na -amaja n'isi obodo Japan dịka usoro ịdọ aka na ntị mberede kwụsịrị n'okporo ụzọ.
Enweghi ihe ojoo nke sitere na Tokai No.2 ike nuklia na Ibaraki Prefecture di nso Tokyo, akụkọ kwuru.
Enweghị ọnwụ, mmerụ ahụ ma ọ bụ mmebi ụlọ nke ala ọma jijiji ahụ mere.